Dowladda Sacuudiga oo soo celinaysa xiriirkii uu la lahaa dawlada Qatar. – iftiin fm
Dowladda Sacuudiga oo soo celinaysa xiriirkii uu la lahaa dawlada Qatar.
November 22, 2020 November 22, 2020 Iftiin FM Reporter 0 Comment
Wasiirka arrimaha dibbadda Sacuudiga Amiir Faysal Bin Farxaan Al-Sacuud ayaa daboolka ka qaaday in dowladdiisu ay bilowday qorshooyin ay kula heshiinayso dawlada Qatar oo uu xiriirkoodu go’ay saddex sanno ka hor.
Wasiirka arrimaha dibbadda Sacuudiga Amiir Faysal Bin Farxaan Al-Sacuud ayaa warbaahinta uu sheegay in dowladdiisu ay ka go’aan tahay dhameynta khilaafka Sacuudiga iyo Qatar waxaana uu intaa ku daray inuu sii jiri doono shuruudahoodii illaa khilaafka laga dhamaynayo.
Amiir Faysal Bin Farxaan Al-Sacuud ayaa carabak ku dhuftay inuu hadda jiro wada hadalo si hoose u bilowday labada dhinac inkastoo uu faafaahin uu ka bixin halka ay marayaan.
Wasiirka arrimaha dibbadda Qatar Sh, Max’ed Bin Cabdiraxmaan Al-Thani ayaa todobaadkii hore sheegay inay jirin cid ka faa’iday go’doomintii Qatar la saaray sanadkii 2017 ee ay dawladaha Khaliijka xiriirka ugu jareen.
← Maxakamadda gobolka Togheer ee maamulka Soomaliland oo dil ku xukuntay Sakariye Cabdi Yuusuf,
Dorosho ka dhaceysa dalka Burkina Faaso. →